Football Khabar » क्रिसमसको अवसरमा मेस्सीको अन्तर्वार्ता : यी पाँच भनाइ, जो अर्थपूर्ण छन्
क्रिसमसको अवसरमा मेस्सीको अन्तर्वार्ता : यी पाँच भनाइ, जो अर्थपूर्ण छन्
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका कप्तानसमेत रहेका प्रमुख खेलाडी लिओनल मेस्सीले अघिल्लो दिन कीर्तिमानी सातौंपटक पिचिची अवार्ड थापे । उनले सातौंपटक ला लिगाको सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै सो अवार्ड जितेका हुन् । गत सिजन २०१९–२० मा २५ गोलसहित मेस्सी सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए ।
चर्चित पत्रिका ‘मार्सा’ले दिने अवार्ड ग्रहण गरेपछि अन्तर्वार्ताक्रममा मेस्सीले आफ्ना केही अर्थपूर्ण भनाइहरू राखेका छन् । यो सिजनको पूर्वसन्ध्यामा बार्सिलोना छाड्ने निर्णय गरे पनि क्लबले फ्रि ट्रान्सफरमा जान नदिएपछि मेस्सी बाध्य बनेर बार्सिलोनामै रहेका थिए । तर, नयाँ सिजन सुरु भएसँगै मेस्सी सधैंजस्तो खुसी छैनन् । न त उनको प्रदर्शन नै लयमा छ । मेस्सी अहिले साँच्चै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् ।
पिचिची अवार्ड ग्रहण गरेपछि क्रिसमस अवसरमा अन्तर्वार्ता दिँदै मेस्सीले सिजनको सुरुआतमा आफूले निकै कठिनाइ भोगेको बताएका छन् । साथै उनले अहिले आफ्नो ध्यान बार्सिलोनामै केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै टिमलाई सबै उपाधि जिताउन आफूले शतप्रशित प्रयास गर्ने बताएका छन् । ‘मार्सा’ सँगको अन्तर्वार्तामा मेस्सीले राखेका मध्ये केही प्रमुख भनाइ यस्ता छन्–
१ ‘म अहिले ठीक छु । म साँच्चै गम्भीरतापूर्वक सबै चिज जित्न आउने दिनहरूमा संघर्ष गर्नेछु । म उत्साहित छु । अहिलेको समयमा क्लबका लागि कठिन छ । टोलीको स्तर र क्लबका सबै चिज कठिन बनेका छन् । तर, आउने दिनका लागि म आशावादी छु ।’
२. ‘नढाँटी भन्दा यो सिजनको पूर्वसन्ध्यामा म ज्यादै निराश थिएँ । किनभने, हाम्रो गत सिजन निकै खराब अवस्थाबाट टुंगिएको थियो । सिजन सकिँदा म विचलित थिएँ । थुप्रै दिन म गहिरो पीडामा रहें । मैले स्पेन छाड्ने निर्णय सोचीसम्झी नै गरेको थिएँ । तर, क्लबले मलाई जान दिएन । यसमा मेरा अहिले पनि तिनै हुन् । तर, अहिले हामी ती सबै कुरा छाडेर सँगै छौं ।’
३. ‘मलाई थाहा छ, बार्सिलोना अहिले कठिन स्थितिमा छ । सायद यो परीक्षणको समय हो । यहाँ क्लबको व्यवस्थापन र हाम्रो टोलीको स्तरमा पनि थुप्रै समस्या छन् । हामी ला लिगामा जसरी संघर्ष गररहेका छौं, त्यसबाट हाम्रो अवस्था थाहा हुन्छ । यो अवस्थाबाट म खुसी छैन । टिम जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसमा म सन्तुष्ट छैन । प्रशिक्षकले आफ्नो प्रयास गरिरहनुभएको छ । तर, हामी हालको भन्दा धेरै राम्रो स्थितिमा हुनुपर्ने थियो । मलाई आशा छ, आगामी दिनहरू राम्रा बनेर आउनेछन् ।’
४. ‘मलाई थाहा छ, मैले यो प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्छ । तर, अहिले म बार्सिलोनामा केन्द्रित छु । मेरो मनस्थिति कसरी चल्छ, मलाई नै थाहा छैन । भविष्यमा जे पनि हुन सक्छ । अहिले यहाँ धेरै कुा ठीक छैनन् । व्यवस्थापन र मैदानको टिममा पनि जटिलताहरू छन् । म यहाँ २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि छु । यो मेरो घर हो । यो सिजनपछि मेरो भविष्य के हुन्छ भनेर म अहिले केही बोल्न चाहन्नँ । मैले आफैंलाई र यहाँको अवस्थालाई हेरिरहेको छु ।’
५. ‘म अहिले पनि टिमलाई सबै उपाधि जिताउन केन्द्रित छु । हामी ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग सधैं जित्न चाहन्छौं । गत सिजन हाम्रा लागि धेरै नै खराब रह्यो । यसपटक हामीमाथि ठूलो दबाब छ । मलाई थाहा छ, यसपटक हामीले केही न केही त जित्नैपर्छ । हाम्रो प्रयास कुनै एक वा दुई मात्रै हैन, सबै कुरा जित्नु हो । टिमले यसका लागि प्रयास गर्नेछ । म टिमलाई सघाउन प्रतिबद्ध छु । जहिलेसम्म म यहाँ रहन्छु, टिम र क्लबप्रति मेरो प्रतिबद्धतामा कति पनि कमी हुनेछैन । म करिअरको अन्तिम खेलको अन्तिम मिनेटसम्म पनि जित्नका लागि खेल्नेछु ।’
प्रकाशित मिति ७ पुष २०७७, मंगलवार १४:४२